5 ခုနှစ်တွင် ဖောက်သည်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု သန်း 30 ကျော်မှ သင်ခန်းစာ 2021 ခု | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 21, 2022 အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 21, 2022 Max Koziolek
2015 တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် ကျွန်ုပ်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပုံတို့ကို ပြောင်းလဲရန် စတင်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဖောက်သည်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကြား ဆက်ဆံရေးသည် အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းမှာ မတိုးတက်ခဲ့ပေ။
signal-to-noise ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ်မြင်ပြီး အမှတ်တံဆိပ်များသည် အလွန်အကျွံ ဆီလျော်မှုမရှိပါက၊ ၎င်းတို့သည် တည်ငြိမ်မှုအပေါ် မကြားရလောက်အောင် ၎င်းတို့၏ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှု အချက်ပြမှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ မရနိုင်ပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ယာဉ်ကြောမောင်းနှင်သည့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ရုတ်တရက်မြင်တွေ့နေရသော်လည်း အရင်းအမြစ်ကို ခြေရာခံ၍မရသည့် မှောင်မိုက်သောလူမှုရေးကွန်ရက်သည် မြင့်တက်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်မြင်သည်။
တည်ငြိမ်မှုအထက်တွင် အဘယ်အရာပေါ်လာပြီး ဖောက်သည်၏အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်သနည်း။ စာတိုပေးပို့ခြင်း။ လူတိုင်းသည် နေ့တိုင်း မက်ဆေ့ချ်ပို့ကြသော်လည်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ထိုချန်နယ်ကို လျစ်လျူရှုနေကြသည် — ၎င်းတို့၏ ထိခိုက်နစ်နာစေရန်။ အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ ပရိသတ်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို နည်းသစ်ဖြင့် ဖမ်းယူနိုင်ရန် ကူညီပေးလိုသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ စတင်လိုက်ပါသည်။ ရောင်စဉ် လူများ အချိန်ဖြုန်းနေသော အက်ပ်များပေါ်တွင် စာတိုပေးပို့ခြင်းမှတစ်ဆင့် တစ်ဦးမှတစ်ဦး အကြောင်းအရာပေးပို့မှုကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ လူများ ၎င်းတို့၏အချိန်များကို ကုန်ဆုံးစေခြင်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များ စကားပြောဆိုရန်၊ နှင့် ဖောက်သည်များ မဟုတ်ပါ။ at သူတို့ကို။ ၎င်းသည် အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးသည့် လုံးဝအသုံးမဝင်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း လျင်မြန်စွာ သဘောပေါက်လိုက်ပါသည်။
ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စကားဝိုင်းစျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းအကြောင်း များစွာသင်ယူခဲ့ပြီး 2021 ခုနှစ်တစ်ခုတည်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ဖောက်သည်တစ်ဦးမှတစ်ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု သန်း 30 ကျော်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် ချတ်စာတိုပေးပို့ခြင်းဗျူဟာကို စတင်ရန်နှင့် ချဲ့ထွင်ရန် ကူညီခြင်းမှ သင်ယူခဲ့ရာ၊ သုံးစွဲသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းက ၎င်းတို့ရှာဖွေနေသော စိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးပေးပုံ။
အလိုအလျောက် စာတိုပေးပို့ခြင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သင်ခန်းစာငါးခု
Fortune 100 အမှတ်တံဆိပ်များသည် ဖောက်သည်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရုံသာမက အရောင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး chatbots များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး chatbot များကို ကူညီပေးခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ များစွာသင်ယူခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ အောင်မြင်သော အလိုအလျောက် စာတိုပေးပို့ခြင်း ဗျူဟာကို ဖန်တီးနိုင်သည့် နည်းလမ်းအချို့နှင့် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
သင်ခန်းစာ 1- Hook ဖြင့် စတင်ပါ။
မားကတ်တင်းသမားတစ်ယောက်၏ အကြီးမားဆုံးမေးခွန်းမှာ အမြဲတမ်းဖြစ်သည်- ကျွန်ုပ်၏ ပရိသတ်၏ အာရုံကို မည်သို့ဖမ်းစားနိုင်သနည်း၊ ၎င်းတို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပိုမိုချိတ်ဆက်ကာ ၎င်းတို့ကို ထိတွေ့ဆက်ဆံလိုသည့် အရာတစ်ခုကို မည်သို့ကမ်းလှမ်းမည်နည်း။ ဦးစွာ၊ သင်ဖြေရှင်းနေသော နာကျင်မှုအချက်များနှင့် အဘယ်ကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင်၏ chatbot နှင့် ထိတွေ့သင့်သည့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောချိတ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။ အတွေ့အကြုံကနေ ဘယ်လိုတန်ဖိုးတွေ ရကြမလဲ။ အတွေ့အကြုံများမှ ရရှိမည့်သူတို့၏ မျှော်လင့်ချက်များကို စီမံပါ။ ထို့နောက် သင့်ဖောက်သည်များအား လဲလှယ်မှုမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရန် လမ်းညွှန်ပေးသည့် တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုမိတ္တူကို အသုံးပြုပါ။
အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသနည်း? သင့်ပရိသတ်သည် ၎င်းတို့နေ့စဥ်မြင်တွေ့နေရသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပါသည်။ သူတို့သည် မတူညီသောအရာကို လိုချင်ရုံသာမက အသုံးဝင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်သည့် အမှတ်တံဆိပ်များကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာသည် အတွေ့အကြုံ၏တန်ဖိုးကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး အကြံပြုထားသော တုံ့ပြန်မှုများဖြင့် ခရီးတစ်လျှောက်ဖောက်သည်များကို လမ်းညွှန်ပေးသော အတွေ့အကြုံများသည် ပိုမိုအားကောင်းသည့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြောင်း ပြသပါသည်။
သင်ခန်းစာ 2- သင်၏ Chatbot ကို ခိုင်မာသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုပေးပါ။
သင့်ဖောက်သည်များသည် “စခရစ်မဟုတ်သော” မေးခွန်းတစ်ခုမေးလာပါက ပိတ်မိနေသည့် နည်းပညာဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ဘော့တ်တစ်ခုနှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိကို သင့်ဖောက်သည်များက ပြောပြနိုင်သည်။ သင်၏ bot ကို စိတ်ဝင်စားစေရန်အတွက်သာမက၊ ၎င်းတို့ကို ပိုမိုစမတ်ကျပြီး တုံ့ပြန်မှုပိုမိုရရှိစေရန် သင်၏ စကားပြောဆိုမှုဒေတာကို အသုံးချရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင့် bot ကို သင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသံနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပေးဆောင်ပါ၊ ၎င်းကို စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရန်နှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုသည့်အခါ အီမိုဂျီများ၊ ရုပ်ပုံများ သို့မဟုတ် gifs များကိုပင် အသုံးပြုပါ။
အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသနည်း? ၎င်းတို့သည် chatbot နှင့် ဆက်သွယ်နေကြောင်း သိသော်လည်း စားသုံးသူများသည် ၎င်းတို့နှစ်သက်သော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်တစ်ခုတွင် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်လိုကြသည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ ဟာသများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ .gifs နှင့် emojis များ သည် ထိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာသည် ခိုင်မာသော ဘော့တ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့် နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ချတ်ဖန်တီးမှုရှိသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် အခိုင်မာဆုံးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိကြောင်းကိုလည်း ပြသပါသည်။
သင်ခန်းစာ 3- သင်၏ စကားဝိုင်းများကို ခြေရာခံပါ။
ဖောက်သည် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများသည်လည်း ဒေတာများစွာကို ဖမ်းယူပေးပါသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းတို့ကို သင်၏စကားပြောဆိုမှုဗျူဟာ၏ဗဟိုချက်တွင်ထားပါ၊ သို့သော် ဤစျေးကွက်ရှာဖွေရေးချန်နယ်အသစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိကျစွာတိုင်းတာကြောင်းသေချာစေမည့် အလုံးစုံသောချဉ်းကပ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
Telekom ၎င်းတို့၏ ဝဘ်ဆိုက် အသွားအလာ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် 9x ပြောင်းလဲနှုန်း ရှိသည်။
ခရမ်းရောင်နု ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်4ဆ ပြန်ရခဲ့သည်။
စိတ်ကြိုက် စာတိုပေးပို့ခြင်းကို အသုံးချခြင်းဖြင့်၊ Ford ကား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် 54% နှိုင်းယှဥ်ရုတ်သိမ်းမှုနှင့် ဝယ်ယူမှုတွင် 38% နှိုင်းယှဥ်ရုတ်သိမ်းမှုတို့ရှိပါသည် — နှစ်ခုစလုံးသည် မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းစံနှုန်းထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။
အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသနည်း? ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစည်းမျဉ်းများနှင့် ကွက်ကီးများကို အပြောင်းအလဲများက စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာအစပျိုးမှုများကို ခြေရာခံနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကို ကန့်သတ်ထားသည်။ စကားဝိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည် သင့်ဖောက်သည်များထံမှ ကြေညာထားသောဒေတာကို တိုက်ရိုက်စုဆောင်းနိုင်သည့် ချန်နယ်တစ်ခုကို ပေးရုံသာမက သင်၏ ROI တစ်ခုလုံးကို နားလည်နိုင်စေရန် ခြေရာခံနိုင်သည့် ထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဖောက်သည်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံသည် ၎င်းတို့၏ funnel ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် chat engagement နှင့် on-site conversions နှစ်ခုလုံးကို အသုံးချနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာ 4: အမြဲတန်းနေပါ။
ဖောက်သည်များသည် သင့်အလုပ်ချိန်အတွင်း ၎င်းတို့၏ဖုန်းများပေါ်တွင်သာ ရှိနေသောကြောင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သုံးစွဲသူများအား နေ့စဥ်အချိန်မရွေး ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန် အလိုအလျောက် တစ်လုံးမှတစ်စ စာတိုပေးပို့ခြင်းများကို အမြဲတမ်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုလက်ခံခြင်း။ အမြဲ-On စကားဝိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာသည် သင့်ပရိသတ်ကို ၎င်းတို့အတွက် သင်ရရှိနိုင်ကြောင်း ပြသသည်။
၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖြေဆိုသူများမှ ပဲ့တင်ထပ်ပါသည်။ လူမှုဆက်ဆံရေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အခြေအနေ. တစ်စုံတစ်ယောက်သည် မက်ဆေ့ချ်အက်ပ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့် ထိပ်တန်းအကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ကို တွေ့ရှိရခြင်းမှာ ၎င်းတို့သည် ထိတွေ့ဆက်ဆံရသည့်အခါတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းရှိနေတာက ဖောက်သည်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပြည့်မီရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ တွေးတောခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းစကားပြောဆိုနိုင်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာတစ်ခုရှိခြင်းသည် ချန်နယ်တစ်ခုအနေဖြင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း၏တန်ဖိုးကို အဆက်မပြတ်မြှင့်တင်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသနည်း? ရေတို၊ မဲဆွယ်မှုကို အာရုံစိုက်သည့် ချဉ်းကပ်မှုများကို လက်ခံကျင့်သုံးသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် အချို့သော ပြန်လာမှုကို မြင်နိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် အမြဲတမ်း ချဉ်းကပ်မှုခံယူနေသည့် အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးချန်နယ်တိုင်းကဲ့သို့ပင်၊ သင်ချတ်တွင်ဖမ်းယူရရှိသောဒေတာအပေါ်အခြေခံ၍ စာတိုပေးပို့ခြင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ပလက်ဖောင်းများတစ်လျှောက် မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်းကို အတိုင်းအတာများသည့် အမြဲပေါ်ချဉ်းကပ်နည်းကို ကျင့်သုံးခြင်းက သင့်အား ရေရှည်တွင် တန်ဖိုးအရှိဆုံးကို ဖန်တီးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? သင်သည် သုံးစွဲသူ၏ တစ်သက်တာတန်ဖိုးကို တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် သင်ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် မက်ဆေ့ချ်ချန်နယ်များပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်သော ပရိသတ်များကို တည်ဆောက်နေပါသည်။ ဖောက်သည်များထံမှ သင်ဖမ်းယူထားသော စာတိုပေးပို့ခြင်းဒေတာအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ စကားပြောဆိုမှု AI ကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
သင်ခန်းစာ 5- ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက် ကြေညာထားသော ဒေတာကို အသုံးပြုပါ။
ကြော်ငြာကမ်ပိန်းဒေတာနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များနှင့်အတူ ဖောက်သည်အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများမှ စုဆောင်းထားသော ကြေငြာဒေတာသည် သင်၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင့်ပရိသတ်များနှင့် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်စေရုံသာမက သင့်ပရိသတ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပိုင်းခြားနိုင်စေရန်နှင့် အဆိုပါမက်ဆေ့ချ်ချန်နယ်များတွင် ၎င်းတို့ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံပုံကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသနည်း? စကားဝိုင်းတွင် စုဆောင်းထားသော ကြေငြာထားသော ဒေတာကို အသုံးပြုသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် မက်ဆေ့ချ်ချန်နယ်များတွင် ပြန်လည်ပါဝင်ရန် အလွန်ပြင်းထန်သော ပစ်မှတ်ထားသော အပိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်သောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာပြသထားပါသည်။ Messenger get ကဲ့သို့ အက်ပ်များရှိ အထူးသီးသန့် ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု အသိပေးချက်များ 80% နှုန်းထားများ နှင့် 35% ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်း ပျမ်းမျှ။ အစဉ်အလာအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းချန်နယ်အဖြစ် ယူဆထားသည့် အီးမေးလ်ကဲ့သို့သော ချန်နယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြီးမားပါသည်။ ထို့ အပြင်၊ ဖောက်သည်များ၏ 78% ၎င်းတို့၏ ကမ်းလှမ်းချက်များသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ပစ်မှတ်ထားမည်ဆိုပါက လက်လီရောင်းချသူထံမှ နောက်ထပ်ဝယ်ယူမှု ပိုများနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
စာတိုပေးပို့ခြင်းသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ အနာဂတ်ဖြစ်သည်။
စကားဝိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောချဉ်းကပ်နည်းမှာ သင့်ဖောက်သည်များ ၎င်းတို့၏အချိန်ဖြုန်းနေသည့်အက်ပ်များပေါ်တွင် အလိုအလျောက်တစ်ကြောင်းမှတစ်ကြောင်း စာတိုပေးပို့ခြင်းမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား နောက်ခံရှိ အခြားအမှတ်တံဆိပ်များ၏ ငြိမ်သက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာမဟုတ်ဘဲ သင့်ဖောက်သည်၏ဘဝတွင် ဂီတဖြစ်လာစေမည့်အရာဖြစ်သည်။
Spectrm's State of Social Conversational Commerce Report ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Tags: aiအလိုအလျောက် စာတိုပေးပို့ခြင်း။အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်botchat bot အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်စကားပြောခန်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုchatbot ချိတ်ဆက်မှုchatbotsစကားပြောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစကားပြောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာစကားစမြည်ဘာသာပြောင်းဖောက်သည်အပြန်အလှန်အချက်အလက်ကို ကြေငြာခဲ့သည်။ရုပ်ပြောင်ရုပ်ပြောင်သင်ခန်းစာများစက်သင်ယူမှုမက်ဆေ့ခ်ျပို့စာပို့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းစာပို့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများprivacy ကိုခရမ်းရောင်နုအစီရင်ခံစာရောင်စဉ်လူမှုဆက်ဆံရေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အခြေအနေtlekom
Max သည် တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သည်။ ရောင်စဉ် — ရှာဖွေမှု၊ လူမှုရေးနှင့် မျက်နှာပြင်ပြသမှုတို့တွင် သုံးစွဲသူများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ကုဒ်မရှိသော စကားဝိုင်းစျေးကွက် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည့် ပလပ်ဖောင်း။ Spectrm chatbot ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များနှင့် စကားပြောဆိုမှု AI တို့သည် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် လွယ်ကူစေသည်။